माघ १३, काठमाडाैं ।
माउन्ट केटु सफलतापूर्वक आरोहण गरेर दश सदस्यीय नेपाली आरोहण टोली स्वदेश फर्किएको छ। विश्वकै दोस्रो अग्लो माउन्ट केटु हिमाल पाकिस्तानमा छ।
आरोही निर्मल पुर्जासहितको नेपाली आरोहण टोली मंगलबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका छन्। आरोहण टोलीलाई आज बिहान विमानस्थलमा टानका प्रतिनिधिहरूले स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले गत माघ ३ गते माउन्ट केटुको सफल आरोहण गरेका थिए।
नेपाली आरोहण टोलीले सफलतापूर्वक माउन्ट केटु आरोहण गरेपछि पाकिस्तानी राष्ट्रपति अरिफ अल्भीले बधाइसमेत दिएका थिए। उनले आरोहीहरूलाई बोलाएर सम्मानसमेत गरेका थिए। उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रपति अल्भीले यो आरोहणले पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुर्‍याउने विश्वास गरेका थिए।
आठ हजार ६ सय ११ मिटर उचाइको केटु हिमालमा हिउँद याममा अहिलेसम्म कसैले पनि आरोहण गरेका थिएनन्। नेपाली १० जना आरोहीले सफलतापूर्वक यो कार्य सम्पन्न गरेका छन्।
नेपालका निर्मल पुर्जा, मिङ्मा जी शेर्पा, मिङ्मा डेभिड शेर्पा, मिङ्मा तेन्जी शेर्पा, गेल्जे शेर्पा, दावा तेम्बा शेर्पा, पेमछिरी शेर्पा, किलुपेम्बा शेर्पा, दावा तेन्जिङ शेर्पा र सोना शेर्पाले केटु आरोहण गरेका हुन्।
अनलाइनखबरमा प्रकाशित आरोहीकाे भावुक अनुभव
राति एकदमै जाडो थियो, त्यो अहिले म शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ । केही साथीहरू अब यतैबाट फर्किने कि भन्ने सोचमा पनि थिए । माइनस ६५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम थियो । हामी त्यसबेला माउन्ट केटुको क्याम्प-३ मा थियौं । समिट हुने हो वा नहुने भन्ने निश्चित थिएन । त्यसबेला दुःख कति थियो, त्यो म कसरी भनौं ? यसरी बुझ्नुहोस् कि कुनै ठूलो अपरेसन गर्नु अगाडि औषधि दिएर बेहोस बनाइन्छ नि ।
हो, त्यस्तै खालको अनुभव तपाईं परिकल्पना गर्नुहोस् । तर म र मेरो टिमको एउटै मात्र लक्ष्य थियो, नेपाल ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालको घर हो । १४ वटा हिमालमध्ये ८ वटा हाम्रोमा छ। तर यी हिमालको पहिलो आरोहणको कीर्तिमान विदेशीका नाममा छ । पक्कै पनि विदेशी साथीहरूको ‘स्पोन्सर’ ठूलो थियो होला । उनीहरूलाई सबैतिरबाट सहयोग भए होला तर पनि वास्तविक खेलाडी त हामी थियौं नि। सम्भवतः तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमण्ड हिलारीपछि सबैभन्दा ठूलो समाचार आज बनेको छ।
यो वर्ष केटु आरोहणमा जाने मेरो कुनै योजना थिएन । तर समाचार हेर्दा ४० जनाभन्दा विदेशी आरोही जसरी पनि केटुको नाममा बाँकी रहेको यो कीर्तिमानी आफ्नो देशको नाममा लैजाने योजनामा रहेको थाहा पायौं । यो सुनेपछि फटाफट झोला प्याक गरेर लागियो पाकिस्तानतिर ।
आजको दिनमा पनि हामीले हाम्रो हक लिन सकेनौं भने भविष्यको पिढीका लागि केही गर्न सक्दैनौं भन्ने अनुभूति मलाई भयो, मेरो टिमलाईं भयो । के गर्नु हजुर, गरिब देशमा जन्म भयो । न त हाम्रो सरकार बलियो छ, न त हामी नै । चित्त दुख्छ, नेपालमा विदेशमा भन्दा धनी-धनी दाजुभाइ पनि हुनुहुन्छ । कसैले पनि हामीलाई सपोर्ट गरेनन्।
टिमका सबै सदस्यले आफ्नो गोजीको पैसा झिकेर हामी पाकिस्तानतिर लागेका हौं । तर भन्छन् नि देशले के दियो, त्यो नसोच्नु आफूले देशलाई के दियो भनेर प्रश्न गर्नु । हो, हामीलाई त्यस्तै भावनाले अगाडि डोहोर्‍याएको हो।टिमको सबै सदस्यलाई भित्र मनदेखि नै नेपालका लागि यो गर्नुपर्छ भन्ने थियो।
हामीले एउटै लक्ष्य पूरा गर्न ज्यानको बाजी लगाएर अगाडि बढ्यौं । मान्छे लोभी जात हो । उसलाई सधैं नामको लोभ हुन्छ। यो सफलता विश्वमा ओलम्पिक वा वर्ल्डकप जितेभन्दा ठूलो हो । न्युज मात्र हेर्नुहुन्छ भने विश्वभर दुई अर्बभन्दा बढी मानिसमा यसको प्रचार भएको छ । कसले गर्‍यो ? नेपालीले गर्‍यो ।
समिट अगाडि हामी १० मिटरको दुरीमा रोकियौं । किनकि यो जस टिम लिडरले मात्र लिने कुरा होइन । सबै दाजुभाइको काँधमा ३५ किलोभन्दा बढीको भारी थियो । त्यो चिसो हिउँमा, बेगले चलेको हावालाई चिर्दै हामी एक साथ चुचुरामा पुग्यौं । यसबाट हामीले दिन खोजेको सन्देश थियो, विश्वमा हामी एक भयौं भने सबथोक गर्न सक्छौं । विभाजनबाट केही पनि गर्न सक्दैनौं । यो शक्तिशाली सन्देश दिएका छौं ।
देश गरिब भएपनि मन ठूलो छ । सोच फराकिलो छ। हामी सकारात्मक सन्देश विश्वभर पुर्‍याउन सफल भएका छौं। यसमा सबै टिम सदस्यको ठूलो योगदान छ। यो इतिहास अब कहिले पनि मेटिने छैन । आरोहणका दौरान हामीले नेपालको झण्डा लगेर गएका थियौं । यो झण्डा आज हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गरेका छौं।
प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी तपाईंको छोराहरू हो । तपाईं हाम्रो अभिभावक हो । तपाईंको छोराहरूले आज विश्वमा छाति फुलाएर, ज्यान ठोकेर परिचय दिन सक्ने काम गरेर फर्किएका छन् ।
(केटु हिमाल आरोहण गरी नेपाल फर्किएपछि आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीबाट सम्मान थाप्ने कार्यक्रममा टिम लिडर निर्मल पूर्जाले व्यक्त गरेको आरोहण अनुभव)
संसद‌मा कांग्रेसको नाराबाजी, प्रचण्ड-माधव समूहद्वारा बैठक नै बहिस्कार
नेकपा नाम विवादबारे आज सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै